पानी पिउँदा सर्किएर सधैका लागि अस्ताए चन्द्र! – Khabar Patrika Np
पानी पिउँदा सर्किएर सधैका लागि अस्ताए चन्द्र!
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: ७:०१:०९
काठमाडौ।“पानी पिउँदा स’र्कि’ए’र शनिबार बिहान एक ब्यक्तिको मृ’त्यु भएको छ। ‘मृ’त्यु हुनेमा फिदिम ४ निवासी चन्द्र कुमार तुम्बापो रहेका छन्। पानी स’र्किदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एमाले फिदिम नगर कमिटिका सदस्य चन्द्रकुमार तुम्बापोको नि’धन भएको हो ।”
खाना खाने क्रममा पानी पिउने हुँदा स’र्कि’ए’र तुम्बापो सि’’कि’’स्त वि’रा’मी परेका थिए । तुम्बापोलाई पानी स’र्के’पछि निरन्तर खो’की लागेको थियो । उनलाई उप’चारार्थ पाँचथर अस्पताल ल्याई पुर्‍याउदा उनको नि’ध’न भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ।
यो पनि, एजेन्सी । साउथका सुपरस्टार आज नाम र दामी दुवै हिसाबले कोहीभन्दा पछाडि छैनन् । चिरन्जीवीदेखि विजय देवकरकोन्डासम्म कयौं यस्ता उदाहरण छन्, जो पपुलारिटीमा बलिउड सुपरस्टारभन्दा पनि अगाडि छन् ।
यस्तै एक साउथ सुपरस्टार हुन्, अल्लू अर्जुन । आफ्नो अभिनय, एक्सन र नृत्यबाट दर्शकको मनमा बसेका उनी साउथका सर्वाधिक डिमान्डेड र महंगा अभिनेतामध्ये एक हुन् । अब उनकी चार वर्षकी छोरी अल्लू अरहाले पनि अभिनयमा डेब्यू गर्ने भएकी छन् । अभिनेत्री सामन्था अक्किनेनीको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘शकुन्तलम’ मा अल्लू अर्जुनको छोरीले अभिनय गर्नेछिन् । उनी स्वयंले सोसल मिडियाबाट छोरीले फिल्ममा डेब्यू गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । चौथो पीढीले फिल्ममा आफ्नो सुरुवात गर्न लागेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
अल्लू अर्जुनको परिवारको तीन पीढी पहिलादेखि नै साउथ फिल्ममा आबद्ध छ । उनका हजुरबुबा, बुबा र अल्लू अर्जुन स्वयं फिल्मसँग जोडिएका छन् । अब यो परिवारको चौथो पीढीले फिल्ममा पाइला राख्न लागेको हो । अरहा फिल्ममा सामन्थासँग देखिनेछिन् । उनीसँग अल्लू अर्जुनले धेरै फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । पर्दामा उनीहरुको जोडी दर्शकले निकै रुचाएका छन् ।